- पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि बारम्बार, निगमबाटै लुकाइएको छ वास्तविकता
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि बारम्बार, निगमबाटै लुकाइएको छ वास्तविकता
नेपाल आयल निगमले बुधबार राति १२ बजे पछि लागु हुनेगरि प्रेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । निगमले बिभिन्न स्थानका डिपोबाट वितरण हुने आधारमा फरक-फरक दर लागु हुने तवरले मूल्य वृद्धि गरेको छ ।
यस्तैगरी पटक-पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि सरोकारवालाहरु मौन बसेको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको समय-समयमा घटबढ नभएको होइन तर यो पटक छोटो समयमा नै बारम्बार मूल्य वृद्धि भैरहेको छ । नयाँ सरकार आइसकेपछि चार पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो सरकारले यसलाई खासै चासो दिएको भने पाइएको छैन ।
। बेला-बेलामा बिधार्थी संगठनहरुले बिरोध जनाएपनि त्यसमा खासै उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
यसरी बारम्बार भइरहने मूल्य वृद्धिले सामन्तीवादीलाई भने अझ बढी राहत पुग्ने गएको छ । मूल्य वृद्धिसँगै यसले उच्च वर्गीयहरुलाई खासै फरक परेको नदेखिएपनि निम्नवर्गलाई भने यसले प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ ।
सबैले मान्ने कुरा यो हो की अन्तराष्ट्रीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको असर नेपालमापनि देखा पर्छ तर बारम्बार अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तलमाथि भइरहेको हुन्छ र पनि नेपालमा अन्तराष्ट्रिय बजारसँगै मूल्य वृद्धि हुन्छ तर घटेको भने खासै पाइएको छैन । आयल निगमले उक्त मूल्य थाहा नै पाउँदैन वा थाहा पाएर पनि घटाउँदैन यो एक अचम्मको कुरा हो ।
नेपालले पहिले देखि नै भारतबाट तेल आयात गर्दै आइरहेको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने भारतमा नेपालमा भन्दा तेलको मूल्य हालको स्तिथिमा बढी छ । आयल निगम भन्छ, ‘जब अन्तराष्ट्रिय बजार सँगै भारतीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने गर्छ ।’ तर ५ वर्ष अगाडी देखिको बजार भाऊलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आजको भन्दा करीब १६.५ प्रतिशत बढी रहेको थियो भने भारतमा आज भन्दा करीब ८.५ प्रतिशतले कम थियो यद्यपि दुबै देशमा अन्तराष्ट्रीय बजार मूल्य अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपाल आयल निगमले २०७० जेठ महिनाको मूल्य बाट बढाएर २५ भदौ २०७० मा पेट्रोलको मूल्य १३० तथा डीजल र मट्टीतेलको मूल्य १०३ कायम गरेको थियो । उक्त समयमा आयल निगमले आफु घाँटामा गएका कारण मूल्य वृद्धि गरिएको जनाएको थियो तर कर्मचारीहरुलाई बोनस भने पुरानै हिसाबबाट खाइरहेका थिए । जनतासंग अनुचित ढंगबाट रकम उठाएर कर्मचारीलाई बाढ्नुलाई के भन्ने ? यसलाई पनि भारतीय बजारले प्रभाब पारेको भन्ने की नेपाल सरकार तथा आयलनिगमको कमजोरिका रुपमा स्वीकार गर्ने ?
२०७० साल पछि त्यस बेलाको सरकारले मूल्य समायोजन गर्दै गएको थियो । २०७१ मंसिर १५ सम्म आईपुग्दा पेट्रोलको मूल्य १ सय २३ रुपैया तथा डीजेल र मट्टीतेलको मूल्य ९७ रुपैंया कायम गराएको थियो । त्यसपछि पनि बिभिन्न समयमा मूल्य समायोजन गर्दै २०७२ साल भदौ १५ गते सम्ममा पेट्रोलको मूल्य १०४ र डिजेल मट्टीटेलको मूल्य ८२ ररुपैंयामा झरेको थियो । त्यसपछि २०७३ साल साउन १८ गते मा पेट्रोलको मूल्य ९७ तथा डिजेल मट्टीटेलको मूल्य ७३ कायम भएको थियो निकै लामो समय स्थिर रहेको मूल्य २०७४ साल कार्तिक १५ गते पछि वृद्धि हुँदै पेट्रोल १०० र डिजेल, मट्टीतेल ७५ रुपैया ५० पैसा कायम भएको थियो । त्यस यता लगातार रुपमा पटक-पटक मूल्य वृद्धि हुँदै बिहीबारबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल ११० र डिजेल,मट्टीतेल ९२ रुपैंया कायम भएको छ ।
यसरी बिगतलाइ हेर्दा
बारम्बार मूल्य वृद्धि हुनु र निगमले अन्तराष्ट्रीय आधार मानेर मूल्य वृद्धि गरेको भन्नु अपाच्य कुरा हो ।
यसबाट बिशेषगरी किसान,ब्यापारी,यातायात व्यवसायी,बिधार्थीका साथै अन्य सर्बसाधारण समेत प्रत्यक्ष असारमा परेको पाइन्छ । मूल्य वृद्धि सँगै हुने सामान ढुवानी खर्चले पनि सामान्यतया हरेक सर्बसाधरणको दैनिकीमा असर पारीरहेको हुन्छ भने यातायात भाडादर निर्धारण गर्दा समेत व्यवसायीलाई भाडा वृद्धि गर्न यसले सहज बनाउँदै आएको पाईन्छ ।यसको प्रत्यक्ष रुपमा असर पनि सर्बसाधरण माथि नै पर्न जाने गर्दछ ।
यस विषयमाचासो राख्न सक्ने सम्बन्धित निकायहरुलाई मूल्य वृद्धि सामान्य लाग्नु स्वाभाविक भनेर बुझ्ने वा ध्यान नपुगेको भन्ने ? सरकारले यसलाई कत्तिको महत्वदिनु पर्ने हो या होइन ?
नेपालका हरेक कुना-कुनामा १ पटकको मूल्य वृध्दिले कति असर पुर्याइ रहेको हुन्छ ? तोकिएको यातायात भाडादर कायम गराउन नसक्ने सरकारले विभिन्न स्थानमा मूल्य वृध्दिको फाइदा उठाउँदै बिगतदेखि यात्रुसँग ठगी गर्दै आइरहेको विषयमा सरकारको ध्यान पुग्छ की पुग्दैन ?
कतै, पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नेहरु न गरीब बन्छन् न त भौके मर्छन् भनेर मौन बसीरहेको त होइन ?
यदि होइन भने यस बिषयमा सरकारको ध्यान पुगोस र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाउँदै प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा लुटिरहेका प्रति निगरानी तथा कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् । सर्बसाधारणका लागि जीवनयापनमा असर पुर्याउन यस विषयबाट मुक्ति दिलाइयोस् ।